Abaphembeleli befashoni kwi-Instagram Thatha umdlalo wabo wesitayile phezulu kwi-Notch
AUbomi buye buhle buye kwimeko yesiqhelo, abantu abadumileyo kunye neenkcubeko zesitayile kulo lonke laseAfrika- nababekhona bezona zibalaseleyoAbaphembeleli befashoni ye-stagram-- bafumana izizathu ezingakumbi zokunxiba, baphume benze ingxelo yefashoni phambi kokuba kukhule ixesha lokukhumbula naphi na apho bakhoyo. isitayile sefashoni i-Instagram influencers
Kule veki iphelileyo, ezinye zeenkcenkce ezibalaseleyo kunye neenkwenkwezi zesitayile e-Afrika zaphuma kuluhlu lwamabala akhangelekayo athe, okwabelwana ngawo kwi-Instagram. Inkwenkwezi yesitayile yaseGhana, umdlali weqonga, umbhali, umvelisi, ubuntu beTV, kunye nelegilanthropist, UZynnell Zuh wabhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe ekhazimlisiwe kwibala lesilivere elungelelaniswe kakuhle elineenkcukacha zepeplum. Akukho mfuneko yokuba athi wabetheka ngokulula inkangeleko yenkangeleko.
ENigeria, abantu abadumileyo kunye nabaphembeleli bezitayela bathathe i-Instagram ukubonakalisa imbonakalo eyahlukeneyo- ukusuka kwimbonakalo ebomvu yekhathuni ukuya kuthi ga kumbonakalo ephefumlelweyo yesiko. Idia Aisien wabonakalisa imbonakalo emdaka ebhedini nguTope FnR xa wayesiya URis Martins isidlo sangokuhlwa. Ukugcina izinto ngokwesiko I-Chioma Ikokwu Usibonisile ukuba ilaphu leAdire linokuba lihle kangakanani xa liyilwe kwaye lithunyelwe kanye, ngelixa Ini Dima-Okojie Ibonakalise kwakhona ukuba I-Ankaraxube ngokuprinta kunye ne-comboe yesikeyibhi ihlala ibetha!
Inkangeleko ekwabelwana ngayo kwiveki ephelileyo ngabantu abadumileyo base-Afrika kunye nabaphembeleli bemfashini bekungekho nto imfutshane kubo kwaye kukhuselekile ukuba sithi sihlala kufutshane ngabo.
Jonga ukuba ii-celebs zase-Afrika kunye neenkwenkwezi zesitayile ziye zatshona njani kule veki iphelileyo kaJulayi 2020…
-Ivenkile yokunxiba enempahla yefashoni yabasetyhini kwivenkile yethu
I-Chioma Ikokwu Hamisa Mobetto idia aisien Ini Dima-Okojie UJulitha Kabete Lisa Folawiyo Siyanda Bani UThuli Phongolo Yutee Rone UZynnell Zuh